Tag: bunni | Martech Zone
Axad, Oktoobar 25, 2015 Axad, Oktoobar 25, 2015 Douglas Karr
Waxaan soo bandhignay waxoogaa faahfaahin ah oo ku saabsan sida midabku u saameeyo dhaqanka iibsiga. Kissmetrics waxay sidoo kale soosaartay infographic kaasoo bixiya xoogaa talo gal ah oo kusaleysan beegsiga jinsi gaar ah. Waan la yaabay farqiga u dhexeeya… iyo liintaas waxaa loo arkaa inay tahay mid jaban! Raadinta kale ee Midabka iyo Buluuga Jinsiga ayaa ah midabka ugu caansan ragga iyo dumarka labadaba. Cagaar wuxuu soo saaraa dareenka dhalinyarada, farxadda, diirimaadka, caqliga, iyo tamarta. Ragga waxay u janjeeraan dhanka midabada dhalaalaya, halka
Sayniska midabada waa mid xiiso leh, sidaan qabo. Naqshadayaasha waaweyn - hadey yihiin gawaarida, qurxinta guryaha, naqshadeeyayaasha garaafka, ama xitaa kuwa adeegsadayaasha adeegsadayaasha ah waxay fahmayaan kakanaanta midabada iyo muhiimadda ay leeyihiin. Laga soo bilaabo midabada midabka loo xushay si loo hubiyo inay bixiso iswaafaqsan - midabada dhabta ah ee la adeegsaday - waxay saameyn weyn ku leedahay habdhaqanka isticmaalaha. Midabku wuxuu kordhiyaa aqoonsiga astaanta 80%, taasoo toos u horseeda kalsoonida macaamiisha. Waa tan sida midabyadu u saameeyaan Mareykanka